पोलेको मासु खाने बानी छ ? छ भने आजैदेखि छोड्नुहोस् Nepalpatra पोलेको मासु खाने बानी छ ? छ भने आजैदेखि छोड्नुहोस्
चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) का डिएम इण्डो क्राइनोलोजिष्ट डा. सौरभ खतिवडा बोसो बढी भएको मासु खाँदा मोटोपना बढ्ने बताए । मासुसँगै खाद्य परिकार धेरै खाइने हुँदा यसले शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउने उनको भनाइ छ ।